Forum serasera malagasy Ny Didy 12 - Dinika forum.serasera.org
Ny Didy 12
Fitohizan'ny hafatra : Re: Ny Didy 12
Pejy: Voalohany < 6 7 8
RBNIR - 19/05/2020 13:13
Ka IZA azany no nisavika ilay Anarana Tokana Aman-Tany ary Masina @ samy izay masina, tsy tokony ho adikadika sy tonontononina, anarana izay voarakitra @ teny Malagasy madio mangatsagatsaka, @ ilay teny manao hoe "Andriamanitra".
1- ny Anganon'ny Ntaolo ve no nisavika ny anaran'ny Dieu Kristiana, ary dia nantsoiny toa izay koa ny Vadin'i Andriananahary, sa
2- ny Misionera Fotsy no nisavika ny anaran'ny Vadin'i Andriananahary, ary dia nantsoiny toa izay koa ny Dieu Kristiana
TSY ao anaty Baiboly izany resaka izany, satria TSY ao anaty Baiboly i Madagasikara sy ny Ntaolo Malagasy.
Ka dia valio tsotra fotsiny: #1 sa #2 ry RBNIR sy Midrou?
Efa fantatra nefa moa ny honnetete intelektoalinareo ry RBNIR, ka na dia manontany hoe valio azany aho, dia tsy manantena valiny TSOTRA sy mazava hoe #1 na #2 avy aminao.
Fa eritrereto tsara ao an-dava-batonao ao, ary fantatra akoriny aza fa efa hainao ilay izy, ka na tsy hilaza azany ianao dia na i Jesosy ao @ imazination-nao azany mahalala, fa dia hoe...
raha miantso an'Andriamanitra i Nampoina (sy ny Malagasy), dia ilay Vadin'i Andriananahary no hamaly ny antsony.
Raha ny fahalalako tamin'ny andron'ny misionera voalohany mbola tsy nantota ilay anganon'ny ntaolo?
Dikany tsy tamin'ny anganon'ny ntaolo no nangalana ilay Anarana hoe Andriamanitra...
rhaj0 - 19/05/2020 13:17
Ary raha miantso an'i Tianzhu koa ny Sinoa, dia ilay Heavenly Master (Chinese name of God) no hamaly ny antsony.
rhaj0 - 19/05/2020 13:22
RBNIR Raha ny fahalalako tamin'ny andron'ny misionera voalohany mbola tsy nantota ilay anganon'ny ntaolo?
Izany ve no mbo vokatry ny asa-sainao lehibe ao ry RBNIR?
Inona no atao hoe LOVA-TSOFINA?
Ilay teny hoe Andriana+manitra izany ve nalaina t@ Hebreo sa teny Hebreo ry RBNIR?
Tohizo velabelaro eto ihany ho'a ny hadalanao ry RBNIR aa... zara azany mihahaka eto @ interinety mandrakizay io.
Aza asiana fahatsoram-po sy fahitsian-tsaina mihintsy io ry RBNIR fa ataovy amboletra foana, araka ny maha-Kristiana anao ao aa... Bravo!
RBNIR - 19/05/2020 13:50
ny fanontanian'i rhaj0 ange izany no tokony amboarina e! satria ianao dia mametraka fa tao amin'ny anganon'ny ntaolo (boky voasoratra taty aoriana be) no nosavian'ny kristiana...
dia manambara tsotra aho hoe TSIA tsy tao amin'ny anganon'ny ntaolo fa nanao fikarohana ireo kristiana ireo hoe Iza no fiantsoina Ilay tsy hita maso nefa manana maso midina mahita ny ataon'ny tsi11 avy ao ambony ao...
rhaj0 - 19/05/2020 14:30
Eny azany fa dia ahitsy amboarina izany ny fanontaniana sy ny petra-kevitra ary averina eto indray
Araka ny Lovan-Tsofina, izay noraketina an-tsoratra ao @ Anganon'ny Ntaolo (pejy 202) taty aoriana, (ary toa izay koa ny an'ny Sinoa), dia fantatra tsara izao fa...
Fanjanahan-tsaina sy fanitsakitsahana kolotora izay mbola mandemy ny sain'ny Kristiana h@ izao
- Raha ny nivavahan'i Abrahama, sy ireo (t)ao moyen-orient, dia ilay hoe YWVH na Yaveh,
- ary raha ny nivavahan'ny Kristiana eraky Eoropa, dia ilay hoe Dieu/God.
- ny nivavahan'ny Ntaolo Malagasy dia i Andriamanitra, ilay vadin'i Andriananahary Malagasy
- ny nivavahan'ny Ntaolo Sinoa dia i Tianzhu, dia ilay Heavenly Master (Chinese name of God)
Fa kosa, nosavihan'ny Misionera Fotsy ireo teny ireo, dia i Andriamanitra sy i Tianzhu, ary nakapony ho izay koa ny anaran'ilay Tokana Aman-Taniny HONO, dia ilay antsoiny hoe Dieu/God na YWVH
rhaj0 - 19/05/2020 15:44
... nosavihan'ny Misionera Fotsy ireo teny ireo, dia i Andriamanitra sy i Tianzhu, ary nakapony ho izay koa ny anaran'ilay Tokana Aman-Taniny HONO, dia ilay antsoiny hoe Dieu/God na YWVH
Eritrereto obzektivema tsara ao ry RBNIR (sy Midrou) aa..
Io izao ohatra, raha manao toa ireo Misionera koa aho, dia mba ahoana hoz'ianao ry RBNIR raha..
... hosavihako ny teny manondro ny anaranao, RBNIR, ary hakapoko ho izay koa ny anaran'ilay kisoabe malotokeliko ato...
midrou - 19/05/2020 18:14
Io ndray lou rah ôtrn'ah de ts tokony hasarotina satria amiko dia efa nokororohin'A/tra ( novainy ho samy manana NY azy ny fiteny) tao Babela ny tenim-pirenena....
Ka na Dieu/God/Yaveh/Jéhovah....sns
De samy manana ny hanononany azy fa kosa fantatr'ilay namorona an'zao tontolo zao foana hoe Izy tokoa no antsoina
Tahaka ny ahy hoe Jesosy
Fa raha NY tena Anarany (ilay tena Izy) de TS mbola misy mahalala
11. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka, indro, nisy soavaly fotsy; ary
Izay nitaingina azy dia atao hoe Mahatoky sy Marina, ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany.
12. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro; ary Izy manana anarana voasoratra, izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany.
13. Ary miakanjo akanjo voafafy rà* Izy; ary ny anarany atao hoe Ny Tenin'Andriamanitra.
rhaj0 - 19/05/2020 18:50
dia ahoana koa azany ry Midrou raha ..
... hosavihako ny teny manondro ny anaranao, Midrou, ary hakapoko ho izay koa ny anaran'ilay gidrobe maimbokeliko ato...
Ny anareo Kristiana ve no manjavozavo ao, ka hoe "TS mbola misy mahalala" HONO , hozy i Midrou, dia ny an'ny Malagasy (sy Sinoa) no "kororohinareo"?
Mbo saro-piaro ny an'ny Razanao ry Midrou aa...
RBNIR - 20/05/2020 00:58
Ity no tena takian'Andriamanitra ho fantatry ny olonarehetra...
« Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: Indro, rehefa tonga any amin'ny Zanak'Isiraely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy: Iza moa no anarany? dia ahoana no havaliko azy? » (Eksodosy 3:13)
« Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: IZAHO, IZAY IZY HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY. Ary hoy koa Izy: Izao no holazainao amin'ny Zanak'Isiraely: IZAHO IZAY Izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. » (Eksodosy 3:14)
Rehefa fantatry ny olona IZY ILAY HATRIZAY ARY HO MANDRAKIZAY dia ampy Azy izay....(tsy misy Anarana takiany eo fa vakio tsara....
rhaj0 - 20/05/2020 04:08
Aoka ho'a Ratiatsimpontsimpona Betsindrontsindroka RBNIR.
Venteso kely hoe ny Didy 10 ry RBNIR? Venteso sady eritrereto tsara hoe inona ity ventesinao (fa tsy atao tsianjey maimbo toa ny nataonao @ fanekem-pinoana)..
Dia hahita ianao ny @ ilay Anarana-Tokana-Aman-Tany ao @ io Didy 10 Kristiana io
rhaj0 - 20/05/2020 12:56
Ka mbola mieritreritra ny tsy fahaizanao ny Didy10 ve ry RBNIR aa ..
- Sady TSY takatr'i Ratiatsimpontsimpona Betsindrontsindroka RBNIR ny Didy 10, izay mampazava ny resaka eto,
- no TSY takatr'i RBNIR koa fa Mosesy sy YHWH (fa TSY i Jesosy) anie no resaka ao @ io notsindrontsindrohany io.
Ineny Gogola hanontaniana, fa tsy voazava ao anaty Baiboly io resaka io re ry RBNIR aa..
YHWH (????) is the proper name of God in Judaism. Neither vowels nor vowel points were used in ancient Hebrew writings and the original vocalisation of YHWH has been lost.
hi hi hi... dia rehefa very ilay fanononana ilay hoe YHWH, dia nasisika tao @ Didy 10 hoe,
Aza manonontonona ny AnaraNY.
'ngaha tsy sampona mihintsy izy'ty eeee...
RBNIR - 20/05/2020 13:29
ka izaho aloha tsy ho latsaka amin'ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo e!
noho io masirasira io no nahatonga azireo "tsy sahy" mivavaka amin'i Jesosy...
« Ary hoy Jesosy taminy: Mihevera, ka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo sy ny Sadoseo. » (Matio 16:6)
Izaho mivavaka amin'i JEsosy, ary manaiky ilay Andriamanitra 3 izay iray e!
rhaj0 - 20/05/2020 14:03
rhaj0 Ka mbola mieritreritra ny tsy fahaizanao ny Didy10 ve ry RBNIR aa ..
RBNIR - 20/05/2020 13:29 ka izaho aloha tsy ho latsaka amin'ny masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo e!
Wow... vavolombelona daholo nareo eto @ serasera, ary io raketina eto io, fa TSY mandraharaha izay DIdy 10 i RBNIR fa masirasiran'ny fariseo sy ny sadoseo HONO izany.
Dia nefa anie ilery tia tsindrotsindroka ny revin'i MOsesy ihany, izay
- nanonta teo ambony vato ny Didy 10
- sy nanazava sy nampianatra ny @ YHWH (fa tsy i Kristy)
RBNIR - 20/05/2020 14:33
mitandrina ny didy 10 aho fa tsy araka ny fitandreman'ny fariseo Azy izao mino ilay Andriamanitra 3 izay 1....izay tsy takatrny fariseo sy ny sadoseo....
rhaj0 - 20/05/2020 16:27
Ka venteso azany izany Didy 10 tandremanao izany ry RBNIR aa....
RAha hainao mantsy io ataonao tsianjery maimbo tsy ampiheverana io, toa ny fataonao @ fanekem-pinoana ihany ho'a, dia tsy miteniteny foana ny @ ilay Anarana-Tokana-Aman-Tany (hono) eto foana ianao ry RBNIR.
rhaj0 - 29/05/2020 14:34
Aiza izy'ty ry RBNIR aa... Zoma hariva izao any aminareo, ary ianao efa tsy mandeha vendredi zoli ihany noho ny finoanao, ka maninona raha ventesina ilay Didy 10 nampianarina anao tao, dia hita eo hoe...
Mbo ahoana ity fombanao ry RBNIR
- "manonontonona ny Anarany",
- sa indray, "manonontonona ny anaran'ilay ivavahan'ny hafa, fa tsy n'enao",
- na koa, manome anarana hafa an'ilay ivavahanao ao?
Dia tena mbo tsy asianao RBNIR dera sy laza ary hery sy hajany mihitnsy mantsy ilay AnaraNY-Tokana-Aman-Tany an?